Nwa Atụrụ Weston Meijer ga - abụ onye isi ihe ọkụkụ Lipetsk French fries osisi - The Potato System Magazine
FAS Russia nyere arịrịọ nke ụlọ ọrụ Dutch Lamb Weston Meijer ka ọ nweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 40% nke oke na isi obodo Lipetsk na-emepụta fries fries na-emepụta Lam Weston Belaya Dacha LLC, akụkọ Abireg.
N'ihi ya, ndị ọchịchị na-emegide ndị ọchịchị kwere ka Lamb Weston Meijer nweta 39,38% nke osisi na ụlọ ọrụ Lipetsk, nke ya na ndị dị ugbu a ga-abụ 74,5%. Dabere na Kartoteka.ru, ugbu a onye isi ụlọ ọrụ bụ Viktor Semyonov's Belaya Dacha Group of Companies. Companylọ ọrụ a nwere 64,48%.
Ekwesiri ighota na kemgbe mmalite nke ulo oru, ndi nwe ha nwere 75 na 25%. Agbanyeghị, na njedebe nke 2018, Lamb Weston Meijer tinyere akwụkwọ na Federal Antimonopoly Service na arịrịọ iji bulie oke ya na isi ụlọ ọrụ enyere ikike. Na 2019, ụlọ ọrụ Dutch nwetara 31,13% nke oke, na mgbe e mesịrị - 35,52%.
Cheta na n'ọnwa Eprel nke afọ a, ndị otu ụlọ ọrụ Belaya Dacha kwụsịtụrụ ọrụ nke friiz france n'ihi mbelata ihe oriri, wee bido ọzọ n'August. N'ime oge ọrụ ahụ, osisi ahụ mere ọgbara ọhụrụ nke mmepụta ihe ruru 650 nde rubles, nke mere ka o kwe omume ịbawanye ọsọ nke nhazi nduku ma melite ogo nke ngwaahịa emechara.
Tags: "Belaya Dacha"Nwa aturu weston meijerLipetsk mpagharaFrench fires emepụtara
Webinar "Ọgbọ ọhụrụ na fungicidal nchedo nduku"
Owuwe ihe ubi nduku na mpaghara Novgorod dị 5% karịa afọ gara aga
Site na 2028, ndị Russia ga-eri akwụkwọ nri 115 n'arọ kwa afọ